UFranz Kafka weNkcazo yeSigwebo
by UPatrick Kennedy
UFranz Kafka "Ukwahlulelwa" ngumxholo wendoda ethe cwaka ebanjwe kwimeko enyantisayo. Ibali liqala ngokulandela umlingisi walo oyintloko, uGeorge Bendemann, njengoko ejongene noxube lwezinto ezixhalabisa imihla ngemihla: umtshato wakhe ozayo, imicimbi yakhe yezoshishino, incwadi yakhe yokude kunye nomhlobo omdala, kwaye mhlawumbi uninzi Kubalulekile, ubudlelwane bakhe noyise osekhulile. Nangona udaba luka-Kafka lomntu wesithathu lubonisa iimeko zobomi bukaGeorg ngeenkcukacha ezininzi, "Isigwebo" akuyona into ecacileyo yomsebenzi.
Zonke iziganeko eziphambili zebali zivela "ngeCawa ekuseni ngokuphakama kwentwasahlobo" (p.49). Kwaye, de kube sekupheleni, zonke iziganeko eziphambili zebali ziqhutyelwa kwindlu encinci, inxunguphayo uGeorg ayabelana ngayo noyise.
Kodwa njengoko ibali liqhubeka, impilo kaGeorg ithatha inguqu enkulu. Ngenxa yemininzi "Yomgwebo", uyise kaGeorg uboniswa njengomntu obuthathaka, ongenakunceda-isithunzi, kubonakala ngathi yindoda ebhizinisayo ebenomdla. Kanti lo utata uguqula ube ngumfanekiso wolwazi olunamandla kunye namandla. Uvela ngobushushu xa uGeorg ekhungca embhedeni, ngokukhohlakeleyo uhlekisa ubuhlobo bukaGeorg kunye nomtshato ozayo, kwaye uphela ngokumgweba unyana wakhe "ngokufa ngokucwina". UGeorg ubalekela indawo. Kwaye endaweni yokucinga okanye ukuvukela oko akubonile, ukhawuleza kwibhuloho elisondeleyo, uguqula ukukhwabanisa, aze enze umnqweno kayise: "Ngobuthathaka wayelokhu ebambelele xa ekhangele phakathi koomzila othungelwano lweemoto- ukuza kwebhasi okuza kubonakala ngokukhawuleza ingxolo yokuwa kwayo, ebizwa ngegama eliphantsi: 'Bazali bahle, ndihlala ndibathanda, nonke,' kwaye uvumeleke ukuba alahle "(iphe.
Izindlela zokubhala zikaKafka
Njengoko uKafka uthi kwi-diary yakhe ngo-1912, "eli bali, 'Isigwebo', ndabhala kwinqanaba elinesibini lama-22 ukuya kweyesi-23, ukususela ngehora leshumi ukuya kwintsimbi yesithandathu ekuseni. Andizange ndikwazi ukukrazula iinyawo zam ngaphantsi kwidesiki, bekunzima kakhulu ukuhlala. Inkxalabo eyoyikisayo kunye nenjabulo, indlela ibali eliye laphuthuka phambi kwam ngokungathi ndihamba phambili ngamanzi ... "Le ndlela yokwenza ngokukhawuleza, eqhubekayo, yinto enye yayingekho nje indlela kaKafka yokuthi" Isigwebo ". Yayiyindlela yakhe efanelekileyo yokubhala inyaniso. Kwangena efanayo kwidayari, uKafka uthi "kuphela kule ndlela kubhaliwe ukuba kubhalwe, kuphela ngokubambisana okunjalo, ngokuvula okupheleleyo komzimba nomphefumlo."
Kuzo zonke iziganeko zakhe, "Isigwebo" kusoloko yinto ekholisa uKafka kakhulu. Yaye indlela yokubhala awayeyisebenzisayo kule ngqungquthela yecala yaba yinye yemigangatho awayeyisebenzisela ukugweba ezinye iziqwenga zobuxoki. Ngo-1914 u-diary wangena, uKhafka wabhala "ukunyaniseka okukhulu kwiThe Metamorphosis . Ukuphela okungafundwanga. Ukungapheleli kufutshane nomnayile. Kwakuya kuba ngcono kakhulu ukuba andizange ndiphazamiseke ngethuba lohambo lworhwebo. " I-Metamorphosis yenye yeendaba zikaKafka ezaziwayo kangangoko ebomini bakhe, kwaye ngokungaqinisekanga ibali lakhe eliyaziwayo namhlanje . Nangona kunjalo ngeKafka, limele ukuhamba ngokukhathekayo kwindlela yokwakheka ngokugqithiseleyo kunye nokutshatyalaliswa kwengqondo engabonakaliyo eboniswe "Isigwebo."
Baba Kafka's Own
Ulwalamano lukaKafka noyise lwalubuhlungu. UHermann Kafka wayengummeli-shishini, kunye nomfanekiso ophefumlelweyo umxube wokusongela, ukuxhalabisa kunye nokuhlonela ngenyameko kwindodana yakhe enobubele uFranz. "Incwadi kuBawo wam", uKafka uyavuma ukuba "akayithandanga nokubhala kwam kwaye konke okungaziwa kuwe, kwakuxhunyaniswe nayo." Kodwa njengoko kuboniswe kule ncwadi eyaziwayo (kunye neyiyo), u-Hermann Kafka unako ku chatha.
Unesabisa, kodwa kungekho ngaphandle kobuhlungu.
Ngamazwi amancinci kaKafka, "Ndingaqhubeka ndiza kuchaza izinto ezongezelelekileyo zempembelelo yakho kunye nomzabalazo onxamnye nalo, kodwa apho ndiza kungena kwindawo engaqinisekanga kwaye kuya kufuneka ndakhe izinto, ngaphandle kokuba ukususa kwi-shishini lakho kunye nosapho lwakho lube lukholo oluluncedo, olulula ukuqhubeka kunye nalo, oluthandana kakuhle, olunzulu ngakumbi, nolwentlonelo (ndithetha kwangaphandle), ngendlela efanayo ngendlela efana ne-autocrat, xa kwenzeka ukuba angaphandle kwemida yelizwe lakhe, akanaso isizathu sokuhamba nobutshaba kwaye uyakwazi ukudibanisa kakuhle kunye neyona ephantsi kakhulu. "
Kulo lonke "Ukwahlulelwa", uGeorg uhamba ngokubambisana nomhlobo wakhe "oye wabuyela eRashiya iminyaka ethile ngaphambili, enganelisekanga ngamathuba akhe ekhaya" (49).
UGeorg wabukhumbuza uyise wakhe ngala mabali "amangalelo e-Russian Revolution. Ngokomzekelo, xa wayesetyekishini eKiev kwaye wagijimela ingqungquthela, wabona umfundisi ebhaleni owawunqamle umnqamlezo omkhulu kwigazi entendeni yesandla sakhe waza wabamba isandla waza wabhenela isihlwele "( 58). U-Kafka usenokubhekisela kwiRussian Revolution ka-1905 . Enyanisweni, enye yeenkokeli zale Revolution yayingumbingeleli ogama linguGregory Gapon, oye wahlela ukuhamba ngokuthula ngaphandle kweNkundla yaseBlack e- St Petersburg .
Nangona kunjalo, bekungeyiyo ukucinga ukuba uKafka ufuna ukubonelela umfanekiso ochanekileyo wonyaka we-20 wenkulungwane yeRashiya. Kwi "Yomgwebo", iRashiya yindawo engabonakaliyo. Kuyinto eselulekileyo yehlabathi ukuba uGeorg noyise akazange babone kwaye mhlawumbi abayiqondi, kwaye indawo apho iKafka, ngenxa yoko, ingaba nesizathu esicacileyo sokuchaza kwiinkcukacha zoxwebhu. (Njengombhali, uKafka akazange aphendule ngokukodwa ukuthetha ngeendawo zangaphandle kwaye azigcine kude. Emva koko, waqala ukuqamba iveli yaseMelika ngaphandle kokutyelela iUnited States.) Kodwa uKhafka wayazi kakuhle kubabhali abathile baseRussia, ngokukodwa Dostoevsky . Ukususela ekufundeni iincwadi zesiRashiya, mhlawumbi wayekukhothoza imibono engabonakaliyo, engabonakaliyo, engabonakaliyo yaseRussia ekhulayo kwi "The Judgment."
Cinga, umzekelo, uGeorg ucinga ngomhlobo wakhe: "Ulahlekelwe ebukhulu beRashiya wambona. Ngomnyango wendawo yokugcina impahla engenanto, wambona. Phakathi kokugqithiswa kweembonakaliso zakhe, iimpahla ezithengiswayo zeempahla zakhe, iibhonki zokuwa kwegesi, wayemi nje. Kutheni, kutheni kufuneka ahambe kude kangaka! "(Iphe. 59).
Imali, iShishini, kunye naMandla
Imicimbi yorhwebo kunye nemali ekuqaleni ibamba iGeorg noyise-kuphela ukuba ibe yintetho yokungahambelani kunye nokuxabana kamva "kwiSigwebo". Ekuqaleni, uGeorg utshela uyise ukuba "andinakuyenza ngaphandle kwakho kwishishini, uyazi kakuhle" (56). Nangona ziboshwe kunye nentsapho, uGeorg ubonakala ebambelela ngamandla amaninzi. Ubona uyise "njengendoda endala" e-ukuba wayengenayo inceba okanye inceba- "yayiya kuhlala yedwa kwindlu yakudala" (58). Kodwa xa uyise kaGeorg efumanisa ilizwi lakhe emva kwebali, uhleka ushishino ngemisebenzi yakhe yeshishini. Ngoku, endaweni yokungenisekile kuGeorg, uyamhlambalaza uGeorg ukuba "adibanise ihlabathi, aphelise izinto endiyilungiselele zona, aphule ngokunyanelana nokutsala uyise kunye nobuso obuvaliweyo bomntu ohloniphekileyo!" (61).
Iingcaciso ezingenakuthenjwa, kunye neempendulo ezinzima
Emva kwexesha elithi "Isigwebo," ezinye zeengcamango zikaGeorg eziphambili ziguqulwa ngokukhawuleza. Uyise kaGeorg uvela ekubonakala ephelile ngokwenyama ukuze enze izinto ezinobungangamsha, kunye nokuziphatheka kogonyamelo. Uyise kaGeorg utyhila ukuba ulwazi lwakhe lomhlobo waseRashiya lukhulu kakhulu, kunzulu kunokuba uGeorg wayecinge. Njengoko ubaba uthetha ngokugqithiseleyo ityala kuGeorg, "uyazi zonke izinto ezilikhulu kangcono kunokuba uzenze wena, esandleni sakhe sokunene uyabhaqa iileta zakho ezingenakuvulwa ngelixa esesandleni sakhe sokunene ubamba iincwadi zokufunda!" (62) . UGeorg uyasabela kule zindaba-kwaye ezininzi zezinye izivakalisi-ngaphandle kokungabaza okanye ukubuza imibuzo.
Nangona kunjalo imeko ayifanele ibe yinto eqondekileyo kumfundi kaKafka.
Xa uGeorg noyise bephakathi kwempikiswano yabo, uGeorg akabonakali ukuba acinga ngezinto aziva ngayo nayiphi na inkcukacha. Nangona kunjalo, iziganeko ze "Isigwebo" ziyamangalisa kwaye ngokukhawuleza, ngezinye izikhathi, kubonakala ngathi uKafka uyasimema ukuba senze umsebenzi onzima wokuhlalutya kunye noguqulelo uGeorg ngokwakhe engenzi ngaso rhoqo. Uyise kaGeorg usenokuba exhaba, okanye uxoke. Okanye u-Kafka udale ibali elifana nephupha kunokubonakalisa inyaniso-ibali apho ukuphazamiseka okukhulu, ukugqithisa, ukungaxilanga kwenza kubekho uhlobo olufihlakeleyo, olupheleleyo.
1) Ngaba "isigwebo" sikubetha njengembali ebhaliwe kwisihlalo esinye sothando? Ngaba zikhona naziphi na izihlandlo xa zingalandeli amazinga kaKaka "ukuhambelana" kunye "nokuvula" -ixesha xa ukubhala kukaKafka kugcinwe okanye kukudideka, umzekelo?
2) Ngubani na okanye yintoni, ehlabathini lokwenene, uKafka ugxeka "kwiSigwebo"? Uyise? Xabiso losapho? UbuNkokeli? Uqobo? Okanye ufunda "Isigwebo" njengebali ukuba, endaweni yokujolisa kwisigxina esithile sogxininiso, ihlose ukutshitshisa nokuzonwabisa kwabafundi bayo?
3) Ungayifumana njani indlela uGeorg avakalelwa ngayo ngoyise? Indlela uyise avakalelwa ngayo ngaye? Ngaba zikhona na iinkcukacha ongazi, kodwa ezo zinokutshintsha izimvo zakho kulo mbuzo ukuba uyazazi?
4) Ngaba ufumene "Isigwebo" ngokuphazamisayo okanye ngokuhlekisayo? Ngaba zikhona naziphi na izihlandlo xa uKafka ekwazi ukuphazamisa nokuhlekisayo ngexesha elifanayo?
Zonke izicatshulwa zekhasi ezibhalwe kwikhompyutha zibhekisela kwiphepha elilandelayo leendaba zikaKafka: "I-Metamorphosis", "Kwi-Colal Penal", kunye nezinye iindaba (eziguqulelwe nguWilla noEdwin Muir.
Ukuhlaziywa kweeWuthering Heights '
Imfazwe ye-1812 101: Ingqwalasela
Amandla Amangalisayo weDD Home
Iphulephu elimnandi liyabhubha Elinobuhlungu Ngayo yonke indlela
Intsingiselo ye-'Desu '